China Sport Hall isakhiwo mveliso kunye nabenzi | Honghua
Uluhlu lokudubula lweMidlalo yaseAsia (iZiko loqeqesho lwediski ebhabha e-Guangzhou) Kule projekthi, sisebenzise ikholamu yentsimbi ejikelezayo, esetyenziswa njengelungu lolwakhiwo lweholo lezemidlalo. Olu hlobo lwekholamu linezibonelelo ezininzi ngenxa yempawu yalo.
Uluhlu lokudubula lweMidlalo yaseAsia (Guangzhou iziko loqeqesho lwediski ephaphazelayo) Ukwakhiwa: 12260㎡. Comppany yethu zibonelela kungamampunge izakhiwo zentsimbi. Iinkonzo zethu zigubungela ibhulorho yentsimbi, isakhiwo sentsimbi, udonga lwekhethini lensimbi, izixhobo zentsimbi.
Kule projekthi, sisebenzise ikholamu yentsimbi ejikelezayo, esetyenziswa njengelungu lolwakhiwo lweholo lezemidlalo. Olu hlobo lwekholamu linezibonelelo ezininzi ngenxa yempawu yalo. Iikholamu zombhobho zensimbi zinokuchazwa njengeekholamu ezidityanisiweyo ezenziwe ngeetyhubhu zetsimbi ezijikeleziweyo ezizaliswe zigqunywe ngekonkile. ithathelwa ingqalelo njengezinto ezakhiweyo ezenza ukuba kusetyenziswe ngokufanelekileyo into nganye kwezi zinto, olu hlobo lweekholamu luye lwafundwa ngokuzimisela ziinjineli ezininzi zophando nophuhliso. Iikholamu ezidityanisiweyo ezenziwe ngeentsika zombhobho zentsimbi kunye nekhonkrithi zinokwahlulwa ngokubanzi ngokweendidi zezakhiwo zazo kwezi ndidi zintathu zilandelayo zekholamu yentsimbi etyhubhu ezaliswe ngekhonkrithi, ikholam yentsimbi yombhobho egqunywe ngekhonkrithi kunye nekholamu yentsimbi yombhobho ezaliswe yaza yagqunywa ngekhonkrithi.
Egqithileyo Izinyuko zentsimbi ezijikelezayo
Okulandelayo: Ulwakhiwo lwentsimbi yesikhululo sikaloliwe